I-Elementor: Isihleli Esihle Sokwakha Amakhasi amahle we-WordPress nokuthunyelwe | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 17, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
Kule ntambama, ngithathe amahora ambalwa ngakha isiza sami sokuqala seklayenti ngisebenzisa i-Elementor. Uma uku mboni yeWordPress, kungenzeka ukuthi usuvele uyizwile i-buzz mayelana ne-Elementor, basanda kufaka ukushaywa kwezigidi ezi-2! Umngani wami u-Andrew, osebenzayo AbakwaNetGain Associates, ungitshele nge-plugin futhi sengivele ngithenge ilayisense elingenamkhawulo ukuyisebenzisa yonke indawo!
I-WordPress ibilokhu izwa ukushisa ngamakhono ayo wokuhlela angenabungozi. Muva nje bavuselele i-Gutenberg, isihleli sezinga le-block esinikeza ngokusebenza okwengeziwe… kepha akusikho lapho kuseduze khona nezinye izindlela ezikhokhelwayo emakethe. Ngokwethembeka konke, ngiyethemba ukuthi bazomane bathenge enye yalawa ma-plugins athuthuke kakhulu.
Eminyakeni embalwa edlule, bengisebenzisa I-Avada yawo wonke amaklayenti ami. Ingqikithi yakhiwe kahle, kusetshenziswa inhlanganisela yetimu ne-plugin ukugcina amakhono wokufomatha. Kokubili kusekelwe kahle futhi kunezinto ezithile ezinhle ezazidinga ukuthuthukiswa noma ukuthenga ngaphambilini.
Elementor yehlukile ngoba iyi-plugin kuphela futhi ingasebenza ngaphandle komthungo cishe nganoma iyiphi itimu. Esizeni engisakhele leli klayenti namuhla, ngivele ngasebenzisa ingqikithi eyisisekelo enconywe yithimba le-Elementor, i- Itimu ye-Elementor Hello.
Ngikwazile ukwakha isiza esiphendula ngokugcwele ngamamenyu anamathelayo, izifunda ezinyaweni, amakhasi afika ngokwezifiso, nokuhlanganisa ifomu… ngaphandle kwebhokisi. Kuthathe isikhashana ukujwayela isikhundla sabaphathi be-Elementor, kepha lapho sengikuzwisisile ukubekwa kwethempulethi, amandla esigaba, nezinto, ngakwazi ukuhudula futhi ngilahle isiza sonke kungakapheli imizuzu embalwa. Kungisindise izinsuku zesikhathi futhi bekungafanele ngihlele umugqa owodwa wekhodi noma i-CSS!
Imithetho Nemidwebo Yokushicilela i-WordPress Popup
Akuvamile ukuthi i-plugin ifike namakhono amahle kangako, kepha nge-Elementor, ungasetha izimo, izingqinamba, nemithetho ethuthukile yokuthi ufuna ukuthi ama-popups ayishicilele kanjani… konke ku-interface elula:
Umklami uyamangalisa impela, futhi aze anikeze nezibonelo ezingekho eshalofini ongazidizayina!
Ngokungeziwe ekusebenzeni okuzivelelayo, Izici Zokumaketha Zifaka
Izixhumanisi Zesenzo - Xhuma kalula nezithameli zakho nge-WhatsApp, Waze, Google Calendar nezinye izinhlelo zokusebenza
Ukubalwa Kwewijethi - Khulisa umuzwa wokuphuthuma ngokwengeza isibali sikhathi sokubala uye kokunikezwayo kwakho.
Iwijethi Yefomu - Usale kahle emuva! Dala wonke amafomu akho bukhoma, ngqo kusuka kusihleli se-Elementor.
Amakhasi Okufika -Ukudala nokuphatha amakhasi okufika akukaze kube lula kangaka, konke ngaphakathi kwewebhusayithi yakho yamanje ye-WordPress.
Isilinganiso Widget Star - Faka obunye ubufakazi bokuxhumana nomphakathi kuwebhusayithi yakho ngokufaka isilinganiso sezinkanyezi bese usitayela ngendlela oyithandayo.
Iwijethi yobufakazi beCarousel - Khulisa ubufakazi bezenhlalo bebhizinisi lakho ngokungeza i-carousel yobufakazi ejikelezayo yamakhasimende akho asekela kakhulu.
Akuyona i-plugin ephelele, noma kunjalo. Ngibhekane nemikhawulo embalwa okufanele uyiqonde:
Izinhlobo Zokuthumela Ngokwezifiso - Ngenkathi ungaba nezinhlobo zeposi yangokwezifiso kusayithi lakho le-Elementor, awukwazi ukusebenzisa i-Elementor Editor ukwenza isitayela lezo zinhlobo zeposi. Umsebenzi owodwa walokhu ukusebenzisa izigaba zokuthunyelwe ukulawula isayithi kuyo yonke indawo.
I-Blog Archive - Ngenkathi ungenza ikhasi elihle lokugcina umlando nge-Elementor, awukwazi ukukhomba lelo khasi kuzilungiselelo zakho ze-WordPress! Uma wenza kanjalo, ikhasi lakho le-Elementor lizophuka. Lolu udaba oluyinqaba ngempela okungithathe amahora ukuthola. Ngokushesha nje lapho ngisetha ikhasi le-blog libe ngelilodwa, konke kusebenze kahle. Lokho kuyibhomu, noma kunjalo ngoba ukusethwa kwekhasi le-blog kusetshenziswa kuyo yonke imisebenzi ye-WordPress template. Ngeke kuvimbele isiza sakho nganoma iyiphi indlela, kumane kuyinkinga exakile.
Ukusekelwa kweLightbox - Isici se-popup sihle impela, kepha amandla okuba nenkinobho uvule ibhokisi lokukhanya ukuze ubone igalari noma ividiyo ayikho. Noma kunjalo, kukhona okumnandi Okungeziwe Okungeziwe enikeza lesi sici kanye nezinye eziningi.
Ukuhlanganiswa kufaka phakathi
Uma uke wahlela ukuhlanganiswa ku-WordPress, uyazi ukuthi kungaba nzima kanjani. Yebo, i-Elementor inokuhlanganiswa okuthuthukile ne-Mailchimp, I-ActiveCampaign, I-ConvertKit, Ukuqapha Komkhankaso, I-Hubspot, Zapier, donReach, Drip, GetResponse, Adobe TypeKit, reCAPTCHA, Facebook SDK, MailerLite, Slack, neDiscord!
Buka Zonke Izici Elementor
Ukunweba i-Elementor Ngezici Ezengeziwe!
Ama-Addons Okugcina ilabhulali ekhulayo yamawijethi we-Elementor wokudala futhi ahlukile avulela uhla olusha lwamathuba wokuklanywa kwakho. Le phakethe elimangalisayo lifaka:
Amawijethi nezandiso - Umtapo wolwazi okhulayo wamawijethi we-Elementor angama-40 + ahlukile athatha amakhono akho wokuklama aye ezingeni elisha lonke!
Izibonisi zewebhusayithi - Izifanekiso ezingaphezu kwe-100 ezenziwe ngokwezifiso futhi ezibukeka ngokumangalisayo ezizosheshisa ukuhamba kwakho komsebenzi.
Amabhulokhi Esigaba - Amabhulokhi wesigaba esakhiwe ngaphambilini angaphezu kuka-200 ahudulwa nje, alahlwe phansi, futhi enziwe ngokwezifiso, enikeza ikhasi lakho umklamo oyingqayizivele ngokuchofoza okumbalwa.
Noma ngabe ungungcweti wokuqamba noma ufika, uzosheshisa ukuhamba komsebenzi wakho futhi uzuze imiklamo ehlukile kalula ngokuphelele.
Ukudalulwa: Ngisebenzisa izixhumanisi zami zokuzibandakanya kule ndatshana ngokuziqhenya.
Tags: elementorizengezo ze-elementorizifanekiso zekhasi le-elementoramawijethi e-elementori-plugin ye-wordpress edumileumhleli we-wordpressumakhi wekhasi le-wordpressumhleli wekhasi le-wordpressplugin wordpress